बिहानै खाली पेटमा भिजाएको चना खादा हुने फाइदाहरु | Chana Benefits in Nepali
चनामा के हुन्छ ?: चनामा मासुमा पाइने भन्दा बढी पोसण तत्वहरु रहेको हुन्छ। chana कसले खाने ?Gym गर्नेहरुले चना खानु पर्छ. शरीर कमजोरी भएकाहरुले चना खानु पर्छ. यौन शक्ति कमि भएकाहरुले चना खानु पर्छ. शरीरमा रगतको कमि भएकाहरुले चना खानु पर्छ. ब्लड प्रेसर लो भएकाहरुले चना खानु पर्छ..
तपाईलाई पहिले नै थाहा भएको हो कि चना खानु स्वास्थ्य को लागि धेरै फाइदाकारी हुन्छ। चना लाई जसरी खाए पनि शरीर को लागि फाइदै फाइदा हुन्छ। तर Target घरेर योजना बद्द तरिकाले खाने हो भने चना बाट अझ बढी फाईदा लिन सकिन्छ।
शरीर कमजोरी भएकाहरुले
यौन शक्ति कमि भएकाहरुले
शरीरमा रगतको कमि भएकाहरुले
ब्लड प्रेसर लो भएकाहरुले
नखाई नहुने एक अतिनै महत्वपुर्ण खाने कुरा चना हो। चना लाइ दैनिक बिहान भिजाएर खाने गरे स्वास्थ्य को लागि भरपुर फाइदा मिल्दछ र यसबाट अति नै महत्वपूर्ण तत्व पाइने गर्दछ।
शरीर मा जब विभिन्न तत्वहरु जस्तै भिटामिन, मिनारल्स, फाइबर आदि जस्ता तत्वहरुको कमि हुन्छ तब शरीर कम्जोर हुन सुरु हुन्छ। कमजोरीपनको महसुस प्राय मानिसहरु सजिलै थाहा पाउन सक्दैनन किनकि कमजोरी पनको लक्षणहरु देखिंदा पनि मानिसहरु सामान्य कारण ले होला भन्ने सोच्दछन र जब शरीरमा धेरै कमजोरीपन हुँदछ तब शरीरमा अनेकौं समस्याहरु उत्पन्न भै सकेका हुँदछन् ।
हात जोर्नी दुख्ने देखि लिएर पेट हुँदै दिमाग को सोच्ने क्षमता मै परिवर्तन आउँदछ। जसको कारण नकारात्मक सोच बढ्ने, फोकट मा थकान महसुस हुने, सुत्न मात्र मन लाग्ने, शरीर फुर्तिलो नहुने, पाचनमा प्रयाप्त फ़ाइफ़र नपुग्दा पाचनमा समस्या आइ खाएको कुरा राम्ररी नपच्ने, बोमिट हुने, शरीर सुक्ने आदि जस्ता विविध समस्याहरु कमजोरी पन र अस्वस्थ्य खानपान बाटै पहिलो चरणमा हुन सुरुवात हुदछ।
त्यसैले शरीरमा इनर्जी बढाउने किसिमका पोसण तत्वमा ध्यान दिन अति नै जरुरी हुन्छ। जब पोषण युक्त खाना खाइन्छ तब शरीर फुर्तिलो बन्दछ र शरीर फुर्तिलो बन्दा धेरै वटा समस्या आउँन बाट बच्न सकिन्छ।
चनामा के हुन्छ ?
चनामा मासुमा पाइने भन्दा बढी पोसण तत्वहरु रहेको हुन्छ।
Folate (भिटामिन बि )
Choline(मस्तिष्कको लागि नभई नहुने तत्व)
आदि जस्ता अनेकौं तत्वहरु चनामा पाइन्छ।